देशभर यसवर्ष करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. भानु पोखरेलका अनुसार कुल बालीको करिब १५–२० प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गएिको छ।
यद्यपि, अधिकांश भू–भागमा वर्षा भइरहेकाले अझै सबै क्षेत्रको तथ्यांक आउन बाँकी भएको उनले बताए।
प्रत्येक प्रदेशमा धानबालीको क्षति कति भयो ? भन्ने एकिन तथ्यांकका लागि कृषि तथा पशुपंन्छी मन्त्रालयले अध्ययन टोली पढाउने भएको छ। शुक्रबारसम्म टोली परिचालन गरिसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ममता थापाले खबर लेखेकी छन् ।
भोलिदेखि राप्रपा महाधिवेशन हुँदै, अध्यक्षमा कमल र ...
प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै सर्वाेच्चमा अबद...